Ministirin Geejjibaa aadde Daagimaawiit kaantibaa magaalaa waashiingitan Diisii waliin marii’atan – Fana Broadcasting Corporate
Ministirin Geejjibaa aadde Daagimaawiit kaantibaa magaalaa waashiingitan Diisii waliin marii’atan
Finfinnee, Sadaasa 2, 2012 (FBC) – Ministirin Ministeera Geejjibaa FDRI aadde Daagimaawiit Moges kaantibaa magalaa Waashiingitan Diisii Muuriyal Boowsar waliin mari’atan.
Marii isaanii kanaanis Muuriyal Boowsar Waashiingitan Diisii magaalaa muuxxaannoo yeroo dheeraa qabdu ta’uun, lammiileen Ityoophiyaa hedduun damee geejjibaa Waashiingitan Diisii irratti bobba’uun akka hojjetan ibsaniiru.
Keessamattuu konkolataa falama qilleensaa hir’iisuu fi ammayyaa elektiirikaan hojjeetu, seera tiraafikaa kabachiisu irratti muuxannoo akka wal jijjiiraan dubbaniiru.
Gama biraatiin bulchiinsa tiraafika,odeeffannoo konkolataa qabachuu, bulchiinsa kaffaltii daandiiwwani, kenniinsa eeyyama konkolaachissumma, maddallii ga’uumsa, nageenya geejjiba fi daandii baabuura irrattis waliin hojjeechuuf waligalaniru.
Ministirin Geejjiba aadde Daagimaawiit akka jedhanitti baatii kana balaa tiraafikan lubbuu darbuu fi miidhama qaama fi qabeenya irra gahuu har’isuuf sosochiin akka biyyatti taasifamuuf jira jedhan.